…हाे त्यसैले म यो पेशमा लागे ! – Taja Khawar
…हाे त्यसैले म यो पेशमा लागे !
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ०५, २०७८ समय: २:५९:०२
कर्मलाई नेपाली कानुनले निषेध गरेको छ। त्यसैले यसको सजिलै पहिचान हुन गाह्रो छ, यहाँ।
मैले बाध्यतावश यो गतिविधिमा लागेका महिलासँग काम गर्ने निधो गरेँ। सकेसम्म उनीहरूलाई यस्तो जो’खिम’बाट मु’क्त गरेर वैकल्पिक पेसामा उभ्याउने उद्देश्यका साथ मैले यस्तो निधो गरेकी हुँ।
त्यसैले यो पेशामा लागेका महिलासँग भेटघाट गर्नु, उनीहरूको कुरा सुन्नु र आवश्यक सरसल्लाह दिनु मेरो कर्तव्यभित्र पर्छ।
यसै क्रममा मैले प्रशस्तै यो पेशामा लागेका युवतीहरु भेटेको छु। उनीहरूको अनुभव सुन्ने र बुझ्ने अवसर पाएका छु।
तीमध्ये यस्ता छन् मैले फेला पारेका अनौठा
पहिलोपटक भेटेको मैले पहिलोपटक भेटेको यस्तो पेशामा लागेको महिला १८ वर्षकी थिइन्। उनी द्व’ ‘न्द्वमा आफ्ना आमाबाबु गु’मा’एपछि आफ्नो गाउँ ९सिन्धुपाल्चोक०मा बस्न नसकी काठमाडौं आएकी रहिछन्।
एक रात विदेशबाट आएको एकजना व्यक्ति त्यो गेस्ट हाउसमा पुगेछन्, बास बस्न। अन्दाजी ४० वर्षका ती ग्राहकले उनीसित स’ह’वा’स ग’र्ने इ’च्छा पोखे गेस्टहाउसका मालिकसँग। मोटो रकम पाएपछि मालिकलाई पुगिहाल्यो।
त्यस रातपछि बा’ध्यता’ले ती महिलाको जीवन जिउने बाटो बनेको रहेछ यो पेशा।
पहिलोपटक भेटेको पुरुष ती पुरुष क’र्मी २८ वर्ष जतिका थिए। यस्तै पेशामा लागेका महिला साथीहरूको सहयोगमा ती पुरुष सँग भेटघाट गर्ने अवसर पाएँ। उनी वैदेशिक रोजगारमा गएका रहेछन्। तर, भनेअनुसारका काम र कमाइ नभएपछि तीन महिनामै उनी स्वदेश फर्केका रहेछन्।
एउटी अचम्मकी युवती एउटी अचम्मकी युवती भेटेँ मैले। उनी पैसाका लागि होइन, केवल यो प्या’ ‘स मे’ट्न पा’र्टन’र खोज्दी रहिछन्। मैले भेट्दा उनी ३८ वर्षकी जस्ती देखिन्थिन्। सहरको सम्भ्रान्त परिवारकी सदस्य हुन् उनी।
उनले आफू यसमा लाग्नुको कारण यसरी बताइन् ‘ज ब मा’प’से गर्छु, त्यसपछि सहवास न’ग’री सुत्नै सक्दिनँ। मेरो अनौठो बानी के छ भने मलाई पानीमा रु’झ्दै भि’ज्दै पार्टनरसँग स’ह’वा’स गर्नुपर्छ। मेरो श्रीमान्लाई भने अचेल यसमा पटक्कै रुचि छैन।
यो समस्या समाधान गर्न म र मेरा श्रीमान् विशेषज्ञकहाँ परामर्शका लागि पनि गयौं तर समस्या समाधान हुन सकेन।
मा’प’से ‘नगरौं भने पनि अचेल बिहे, व्रतबन्ध, पास्नी, भोज, पिकनिक सबैमा ह’ल्का ड्रिं’ ‘क्स चलिहाल्छ। जब म मा’प’से गर्छु, त्यसपछि ममा अ’त्य’धि’क उ”त्ते”ज”ना हुन्छ।
त्यसैले भि’ज्दै वा पानीमा डुबुल्की मार्दै मलाई तृ’ष्णा मे’ट्नु’प’र्छ। यो मेरो सोख नै भइसकेको छ। मेरै श्रीमान्को सहमतिमा मैले एक जनालाई पार्टनर बनाएको छु।
Last Updated on: May 19th, 2021 at 2:59 am